Best Chinese Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Chinese Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Na Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 10/01/2020)
N'ezie na-atọkwa ụtọ na ezigbo ịrịba flavors, ọma Chinese nri bụ mgbe ụfọdụ ike na-abịa site na Europe. Otú ọ dị, ozi ọma bụ na e nwere ịrịba Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe - i nwere mara ebe-ahụ na ha, na-esi e. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ na isi European obodo ma ọ bụ n'isi obodo, ọ bụ mma na-abata ụgbọ okporo ígwè.
na a na-mepụtara ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè netwọk na Europe obụrede mbụre, ọ bụ omume na-esi n'ebe ọ bụla a okwu nke awa - na-enwe ebe mara mma agbaga ụzọ gasị na ụzọ dị ka nke ọma. N'ihi na ndị gị onye na-achọsi ụfọdụ Asian nri staples, ebe a bụ ihe kacha mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe, na-esi n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè:
Sea Obí - Amsterdam, Netherlands
Ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-elekwasị anya na-enye ndị ahịa ihe oké nụrụ ụtọ. Otú ọ dị, Oké Osimiri Obí na Amsterdam Aims iji nye gị ihe ahụmahụ na ga-bụghị naanị na-ekere òkè gị uto buds ma-adị mfe na anya. Wuru ka a pagoda, a-ese n'elu mmiri restaurant bụ a zuru okè ebe iji zuo ike na ụfọdụ ndị kasị mma Chinese nri si n'ebe.
Rice efere, dumplings, buns, spring apụta - aha ya, ha nile na-na menu na akatabi okop ka authentic dị ka ọ bụrụ na ị nọ na China. Nke ahụ bụ ihe na-atụ anya n'aka otu n'ime ndị kasị mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-esi na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè, ị nwere ike enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè si Paris, Berlin, na ndị ọzọ na European obodo.
Hanover na Amsterdam Ụgbọ oloko
Good Friends na Best Chinese Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe - Berlin, Germany
Na a obodo chock-jupụtara Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ịbụ ndị a kpọrọ onye nke kasị mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe na-esetịpụ pụrụ iche. dị na Kantstrase, na Berlin si Chinatown, Good Friends bụ oruru na-anya isi ọtụtụ menu na authentic nri mfọn ma Chinese kwabatara na njem nleta.
Ị ga-aga na-ezighị ezi ma ọ bụrụ na ị gara Good Friends mgbe na Berlin. Iji esi na-Berlin, ị nwere ike na-okporo ígwè site fọrọ nke nta ka ọ bụla isi obodo na Europe na-ahụ n'ime awa.
Dortmund na Berlin Ụgbọ oloko
Düsseldorf na Berlin Ụgbọ oloko
Dresden na Berlin Ụgbọ oloko
Heidelberg na Berlin Ụgbọ oloko
Mgbe anyị chere echiche nke Italy, anyị na-emekarị adịghị jikọọ ya Chinese nri. Ọ bụrụ na ị na-eche otu ihe ahụ, ị ga-abụ na iju gị anya na ndị Ịtali na-eme nwere a adụ ntụpọ maka Chinese specialties. Na otu nke kasị mma Chinese ụlọ nri na Europe, Hangzhou, N'ezie na-egosi na-ekwu.
Ọ na-agụnye ụfọdụ Italian mmetụta, ma ọtụtụ n'ime ndị menu bụ authentic Chinese nri ị ga na-agbalị ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Rome. tour Italy ụgbọ okporo ígwè ime na-eme, ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè na Rome site na otu nke ndị ọzọ European n'isi obodo.
Kwuo Du Dragon bụ N'ezie n'etiti Best Chinese Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe - Brussels, Belgium
Ọzọ restaurant na-anya isi a mma n'ime ime na ubi imewe n'akụkụ ya ịtụnanya efere, Kwuo Du Dragon na Brussels na-n'ụzọ ziri ezi na-akpọ otu n'ime ndị kasị mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe. na n'elu 300 oche na-enwekwa ornamental ubi, ị ga-eche dị ka ị na-eje ije n'ime a kwesịrị ekwesị Oriental nrọ. Ọ bụla efere bụ ebube, ma anyị na-aga ekewapụkwa si inyoghi inyoghi nchikota na ulo ọpụrụiche, Peking ọbọgwụ, dị ka ihe abụọ ị ga na-agbalị ma ọ bụrụ na ị na-na na eleta Brussels ụgbọ okporo ígwè.
Bruges na Brussels Ụgbọ oloko
Maastricht na Brussels Ụgbọ oloko
Halle na Brussels Ụgbọ oloko
Ghent na Brussels Ụgbọ oloko
China Kitchen No. 27 - Vienna, Austriaa
Na Chinatown na Vienna, China Kitchen No. 27 a na-aha dị ka onye nke kasị mma. Ọ bụrụ na ị na-amasị gị nri oseose, nka bu ebe. Ha na-enye ụfọdụ ndị ọzọ pụrụ iche na efere, dị ka octopus salad, ezie na anyị nwere ike ikwu na Gong Bao ọkụkọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ arapara n'ahụ ochie. Ị nwere ike mfe na-aga Vienna ụgbọ okporo ígwè si kasị isi European obodo, n'ihi ya, anaghị atụ uche na ohere.
Dortmund na Vienna Ụgbọ oloko
Dresden na Vienna Ụgbọ oloko
Heidelberg na Vienna Ụgbọ oloko
Düsseldorf na Vienna Ụgbọ oloko
Njikere ịlele ndị na-atọ efere nke ụfọdụ ndị kasị mma Chinese ụlọ nri na Europe? Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge, na hop na a ụgbọ okporo ígwè ime ka ị gị ọzọ nnukwu gastronomical njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chinese-restaurants-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke, a njikọ ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml – n'ime unu nwere anyị njikọ na / en / ma i nwere ike ịgbanwe ya ka / fr / ma ọ bụ / de / ma ọ bụ / ya / na ndị ọzọ asụsụ
#asianfood #BestChineseRestaurants #chinesefood europetravel ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem
7 Best Day Njem Site Venice
Coradia iLint Low-ịnya ụgbọ oloko Europe